Daawo Sawirada: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo gaaray magaalada Dhuusamareeb – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADaawo Sawirada: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo gaaray magaalada Dhuusamareeb
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa goor dhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Mudug, halkaasoo uu kaga qeyb galayo shirka lagu mideynayo maamulada Ahlusuna iyo Galmudug oo bilo ka hor heshiis ku gaaray Jabuuti.
Guddoomiye Taabid ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb Sheekh Maxamed Shaakir, Mas’uuliyiin, odayaal dhaqameed iyo qeybaha bulshada.
Waxaa lagu wadaa in dhowaan ay gaaran Dhuusamareeb Madaxda maamul goboleedyada dalka, iyadoo Madaxweyne Farmaajo oo xilligan booqasho ku maraya deegaanada Galmudug uu u soo gudbi doono Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda diyaar garow lagu soo dhoweynayo Madaxda imaaneysa, waxaana tan iyo shalay ku qulqulayay mas’uuliyiin kala gedisan oo isugu jiray Xildhibaano, siyaasiyiin, saraakiil ciidan hore, oday dhaqameedyo.
Ammaanka magaalada Dhuusamareeb oo ay gacanta ku hayeen Ahlusuna ayaa la adkeeyay, iyadoo ciidamo la dhigay qeybaha laga soo galo magaalada.
Ciidanka AMISOM oo lagu qarxiyay Shabeellaha hoose
41,960 total views, 2,713 views today
41,960 total views, 2,713 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
42,032 total views, 2,712 views today
42,032 total views, 2,712 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
42,044 total views, 2,712 views today
42,044 total views, 2,712 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
42,069 total views, 2,713 views today
42,069 total views, 2,713 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
42,096 total views, 2,709 views today
42,096 total views, 2,709 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]